orinasa mpanodina - Mpamboatra visy any Shina, mpamatsy
Volom-borona fandavahana tena vita amin'ny vy karbaona na vy tsy manify no ampiasaina hanamafisana. Voasokajy amin'ny alàlan'ny kofehin'ny kofehy, misy karazana kofehy volafotsy drillingl roa mahazatra: kofehy tsara sy kofehy madity.
Ny visy hazo dia visy vita amin'ny loha, shank ary vatana misy kofehy. Satria ny visy iray manontolo dia tsy misy kofehy, mahazatra ny miantso ireo visy ireo (PT). Loha. Ny lohan'ny visy dia ny ampahany misy ny fiara ary heverina ho tampon'ilay visy. Ny ankamaroan'ny visy hazo dia loha loha.
Ny visy chipboard dia visy manaparitaka tena misy savaivony kely. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana marina toy ny fanamafisana ny solaitrabe misy habe samihafa. Manana kofehy madity izy ireo mba hahazoana antoka fa hipetraka tsara amin'ny visy amin'ny faritra chipboard. Ny ankabeazan'ireo visy chipboard dia manaparitaka tena, midika izany fa tsy ilaina ny lavaka fanamoriana hatao mialoha. Izy io dia azo alaina amin'ny vy tsy misy fangarony, vy karbonika ary vy firaka hitondra akanjo sy rovitra bebe kokoa ary koa mahatonga azy io tsy mahazaka harafesina kokoa.
Volom-baravarankely drywall vita amin'ny vy karbonika mafy na vy vy no ampiasaina hanamafisana ny drywall amin'ny tadin'ny hazo na amin'ny vy vy. Manana kofehy lalina kokoa noho ny karazana visy izy ireo, izay afaka manakana azy ireo tsy hanala mora foana amin'ny drywall.
Hex Bolts mahery, Bolida heksim-by hex mainty, Boloky Hex Bolts mainty, Hexagon Socket Head Bolts, Din6921 Flange Nuts, horonan,